Naiwei Robot achapinda Chiedza cheMwenje muGuzhen, Zhongshan
ne admin pane 20-10-17
Naiwei Robot Technology Co, Ltd. yakavambwa muna Kukadzi 18, 2020. Yakamutangira ndiNaiwei (Dongguan) Robot Technology Co, Ltd., ine vashandi vanopfuura mazana matanhatu, mafekitori mashanu ebazi, nenzvimbo inodyarwa ye20,000. mativi emamirimita. Iyo kambani ine timu yeR & D ine hupfumi hunoshanda ...
Iyo nyowani nyowani World Robotics 2020 Industrial Robhoti
Rondedzero nyowani yeWorld Robotic 2020 Industrial Robots inoratidza rekodhi yemamirobhoti emamirioni 2.7 anoshanda mumafekitori pasirese - kuwedzera kwe12%. Kutengeswa kwemarobhoti matsva kunoramba kuri padanho repamusoro uye zvikamu mazana matatu nemakumi matatu nematatu zvakatumirwa pasi rose mu2019. Ichi chikamu che12% zvishoma kana ichienzaniswa na2018, asi zvakadaro t ...
Nyamavhuvhu 27, muKarenda yemwedzi weChinese, izuva rinopisa kwazvo, rakadaidza zuva rekuti DaShu
Nyamavhuvhu 27, muKarenda yemwedzi weChinese, izuva rinopisa kwazvo, rakadaidza zuva rekuti DaShu. Vashandi vedu vese vari kushanda nesimba, kuendesa maski muchina ASAP. Isu tinovimba michero inogona kuunza inotonhorera kumusangano, inogona kuunza kutonhorera kune wese mushandi, uye kuyeuchidza munhu wese, kana fe ...
MuKarenda yemwedzi weChinese, 7th, Chikunguru, izuva reChina rekuda, QiXi Mutambo. Naiwei Robot Technology yakaita pati yemudiwa kupemberera.
Nyamavhuvhu 22nd, Naiwei Robot Technology yakaita musangano wekurumbidza
Nyamavhuvhu 22nd, Naiwei Robot Technology yakaita musangano wekurumbidza, nekutenda nekutenda kushanda nesimba kwevashandi pamwe nemipiro mukusimudzira kambani nekupa mubayiro RMB300,000 kune avo vane mipiro yakakosha kumushandirapamwe unopesana neCOVID-19. Mune nzeve ...
Kuchengeta mhemberero makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe yekuvambwa kweChina People's Liberation Army, Naiwei Robot Technology yakaita musangano nemurwi, uyo anosiya basa muchiuto.
ne admin pane 20-08-01
Kuchengeta mhemberero makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe yekuvambwa kweChina People's Liberation Army, Naiwei Robot Technology yakaita musangano nemurwi, uyo akarega basa muchiuto, akatenda zvikuru zvavakapa kukambani. ...
Chikunguru 3rd, Dongguan Shicheng Machinery kuvhura mhemberero
Chikunguru 3rd, Dongguan Shicheng Machinery kuvhura mhemberero. mubatanidzwa pamwe naNaiwei Robot Technology uye Dongguan Hongxiang Machinery. Isu tinotenda ichava imwe yeanonyanya kukosha masiki muchina vagadziri, zvichibva pakukunda kuhwina kubatana kwemakambani maviri. ...
June 1, Naiwei Robot Technology inoronga vashandi nevashandi vevatariri kuti vadzidze iyo yakachengeteka yekugadzira chikamu
ne admin pane 20-06-01
June 1, Naiwei Robhoti Tekinoroji inoronga vashandi uye manejimendi tsvimbo kuti vadzidze yakachengeteka yekugadzira chikamu, inowedzera kuziva kwekugadzirwa kwakachengeteka, uye nekuvandudza kugona kwevashandi kuti vakunde netsaona dzisingatarisirwe, kuve nechokwadi chekuendesa iyo inomhanya servo mota mas ...
Kurume 17th, 2020, mufekitori yeNaiwei Robot Technology, vashandi vakabatikana mukuungana uye kuyedza mask yekugadzira muchina.
▲ kuunganidza uye kuyedza Zvinonzi, Naiwei Robot Technology, yakatangira yaive Naiwei (Dongguan) Robot Technology Co, Ltd, inonyanya kuita zvekutsvaga nekuvandudza ...